Shina avo aryry tokana Lighting pole for Plaza mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > avo andry tokana Lighting Pole > avo andry tokana Lighting pole for Plaza
Ny jiro avo roa metatra avo dia mazàna amin'ny andry vy vita amin'ny vy vita amin'ny 15 metatra na mihoatra ary mihazona jiro mitambatra mahery. Izy io dia ahitana satroka jiro, herinaratra jiro anatiny, vatana vatany ary faritra iray fototra. Ny endrika lohan'ilay jiro dia azo faritana araka ny takian'ny mpampiasa, ny tontolo iainana sy ny filan'ny jiro; ny jiro anatiny dia ahitana jiro sy tondra-drano lehibe indrindra. Ny loharanom-pahazavana dia manamboatra hazavana sodium avo lenta amin'ny NG400 miaraka amin'ny taratra jiro 60 metatra.
Ny vatan'ny rod dia amina vatam-piramidana tokana, izay mivadika avy amin'ny takelaka vy ary manana 15 ka hatramin'ny 40 metatra ny haavony ary mandrafitra fizarana roa na telo.
Yangzhou Langxu Lighting Technology Co, Ltd dia mpamokatra matihanina mampiditra ny endrika famolavolana, fampivoarana, famokarana, varotra ary fametrahana. Izy io dia mamokatra jiro an-dalambe masoandro, famokarana herinaratra photovoltaic, jiro zaridaina, jiro mifanentana amin'ny valan-javaboary, jiro LED, jiro LED, jiro maoderina. Fahazavana, jiro mandeha an-tsaina, jiro avo sy jiro tsy mahazatra. Miaraka amin'ny fahaiza-manao famoronana tonga lafatra sy ny fahaizan'ny famolavolana vokatra vaovao dia mazoto, miovaova, manao ny marina ary mahatoky isika amin'ny maha-tsindry ny orinasan-tena, miaraka amin'ny mpanjifantsika ho toy ny tenantsika, manantitrantitra ny fisandratan'ny kalitao, laza, ny kalitao sy ny serivisy amin'ny serivisy, miantehitra amin'ny matanjaka hery teknika hametraka vidiny mirary. Manome serivisy kalitao, manantena izahay fa ny olona manana idealy avo lenta, mpiara-miasa amin'ny indostria hanatevin-daharana ny fandraharahana angovo maintso sy ny fiarovana ny tontolo iainana.
å é å é|
å å ²è® ° å½
avo andry tokana Light for Plaza
LED avo andry tokana Lighting Pole for Plaza
15M 18m 20m 25m 30m 35m 40m LED nyvo nyryry nyknynny Lighting Pole for plnyzny.Chinny LED nyvo nyryry nyknynny jiro pole mpnymnytsy nyry mpnynnymbonytrny Lnyngxu Lighting mijery hnyndroso ny ny fividinynnynny, isikny diny mnynome inynnyo nymin'ny ny chenyp pricelist nyry ny tsara indrindra quotnytion for inynnyo!
Buy avo andry tokana Lighting pole for Plaza nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba avo andry tokana Lighting pole for Plaza ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized avo andry tokana Lighting pole for Plaza Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.